Ọhụụ abalị na-eji igwefoto ToF nke Galaxy S20, Note10 + na S10 5G | Gam akporosis
Night Night bụ ngwa na-enye gị ohere ịhụ n'ọchịchịrị na Galaxy S20, Rịba ama 10 + na S10 5G
Ọ bụrụ na ị nwere nke ọ bụla n'ime ekwentị Samsung ndị a ị nwere chi, ebe ọ bụ na ị ga-enwe ike iji igwefoto ToF nwee ike ịhụ n'ọchịchịrị ka m na-agwa gị. Bụ site na ngwa Night Vision na nke ị nwere ike ibudata site na Storelọ Ahịa Play.
Ihe niile kpatara ya Oge Flight ma ọ bụ ihe mmetụta ToF nke gụnyere na Galaxy S20, Rịba ama 10 + na S10 5G. Ihe mmetụta na-enyekwa aka ịnwe ike i scanomi ihe na 3D wee gbanwee ha na onyonyo. Ma ugbu a, anyị nwere ngwa a nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anwansi.
Igwefoto ToF a na-achọpụta ọdịiche dị n'agbata ihe abụọ na-adabere na ọsọ nke ìhè mgbe niile. N'ezie, otu ndị mmepe ejirila data sitere na igwefoto a mepụta ụdị 3D dị ọcha na data dị omimi iji nye gburugburu ebe obibi iji mepụta ụdị ọnọdụ ọhụụ abalị.
N'ezie, abalị ọhụụ ngwa Ejirila ya na Honor na Huawei iji ulateomie ọhụụ abalị ahụ, ịbụ otu ihe ahụ ga - enyere anyị aka iji ụdị Samsung ndị ahụ kwuru ka anyị nwee igwefoto ọhụụ abalị. Ọ bụ ezie na ekwesịrị ikwu na afọ gara aga ngwa ahụ achọpụtaghị igwefoto ToF na S10 5G, ya mere ọ gaghị ekwe omume iji ya.
Mana ihe niile agbanweela na mmelite Otu UI 2.0 (echefula ozi banyere mmelite a na Note10 +) ya mere ugbu a ee Ọhụụ abalị nwere ike iji igwefoto ToF niile ụdị 3 Samsung kwuru, ọ bụ ezie na n'oge a na mmepụta dị na mkpebi dị ala nke 240 x 180. N'ezie, na Nkọwa 10 + na S20 ọ na-enye ohere iru 320 x 240 pikselụ nke mkpebi.
Ihe dị iche n'etiti Huawei na Samsung bụ na n'ikpeazụ a na-eme ka ọhụhụ ka mma, ọ bụ ezie na ọnụọgụ ahụ pere mpe karịa na ekwentị ndị China. Iji nweta ọhụụ abalị na Galaxy S20, Note10 + na S10 5G, ị nwere ngwa Night Vision n'okpuru.
ToF Viewer / Night ọhụụ
Developer: Lubos Vonasek Mmemme
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Night Night bụ ngwa na-enye gị ohere ịhụ n'ọchịchịrị na Galaxy S20, Rịba ama 10 + na S10 5G